ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ကွယ်ရာတွင်သာ လက်ဖွာသူ
Posted by yangonthar at 2:57 AM
အင်း ကိုရန်ကုန်လည်း ခုမှ ခံစားနေရပုံဘဲဗျာ
ဒါပေမဲ့ဒါကပြောရခက်တယ်ဗျ ချစ်တာနဲ့သံယောဇဉ်
ရှိတာ တူမလို နဲ့မတူဘူးဗျ ချစ်လို့ သံယောဇဉ်ဖြစ်တာ
နဲ့သံယောဇဉ်ရှိလို့ချစ်တာ ဒါလည်းတူသလိုနဲ့ မတူ
ပြန်ဘူးဗျ . . . အဲ အသေချာဆုံးက တော့ နှလုံးသားက
ဖြေတာ အမှန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် . . . အခုချိန်မှာ အမှန်
တကယ်သ၀န်တို အကြီးအကျယ် ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်
တော့ ဒါဟာ ချစ်လို့ ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့် မယ် . . .ခင်မင်လျက်
ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပေမယ့်သူ့အနားမှာ သူငယ်ချင်းကောင်း တယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာ သူလိုတာကို ကူညီနိုင်ပါသေးတယ် လေ
အရေးအသား ကောင်းလွန်းလို့တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ တောင် ထင်သွားရတယ် ။
အင်း နှစ်သစ်မှာ အချစ်ဟောင်းလေးကို လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးနဲ့ မေတ္တာထားတာပေါ့လေ... အချစ်ဆိုတာ ...ကျွန်တော့်ခံယူချက်ကတော့ ပေါင်းရတယ် မပေါင်းရဘူး နဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘူး သူ့ကို ချစ်နေတယ် ချစ်တယ် ရင်ခုန်တယ် အဲဒီအသ်ိတစ်ခုလေးနဲ့တင် တစ်သံသရာလုံးလုံလောက်ပါတယ်..း)
မပြောဖြစ်တာ ပြောချင်စိတ် မထက်သန်လို့နေမှာပါ... ခံစားချက်ကို ဗုံးပေါက်တာနဲ့နှိုင်းပြထားတာ တအားကြိုက်တယ်.. အရေးအသားကောင်းတယ်လို့က အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ် :)
ဝေးသွားမှပဲတမ်းတမိတယ် လွန်နေတာက ကိုယ့်ဘက်ကကွယ် အချိန်လေးများ နှောင်းပြီ ထင်တယ်။
ဒီအက်ဆေးလေးဖတ်ပြီးတော့ အဲဒီသီချင်း စာသားလေး စိတ်ထဲ ရောက်လာတယ် ရန်ကုန်သားရေ
“ကျွန်တော်သည် ကွယ်ရာတွင်သာ လက်ဖွာဖွာနှင့်စာရေးတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။” အဲဒီစာကြောင်းလေး အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ မောင်လေးရဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် အမြဲကောင်းနေတာပါပဲ။ အလုပ်များပြီး မဖတ်ရသေးတဲ့ စာကြွေးတွေလည်း သေချာလာဖတ်ပါဦးမယ်...
အင်းးး ဒါကြောင့် ကျနော်နောက်ထပ်၃ နှစ် ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်လို့ ပြောတာကိုး..
ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ အချစ်ရှိနေရင် ပူလောင်နေမလားလို့
လေ။မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ အချစ်ပေါ့နော်.. ပိုင်ဆိုင်ပြီးသား
အချစ်ဆိုရင်တော့လည်း တမျိုးဖြစ်မလား မသိဘူး..
မကြီးဝါ မြောက်ပြောလို့ ရည်းစားထားလိုက်မိတယ်ဖြစ်
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အောင် အရင်ကြိုးစားလိုက်ဦးပေါ့လေ.. ချစ်သူကပေါမှာပါ။
အစ်မတွေ့တဲ့ မောင်ငယ်တွေက မာနမင်းသားတွေပါပဲ
လား...ကောင်းတယ်..ပွေတဲ့ ရှုတ်တဲ့သူတွေဆို အစ်မက
ခေါင်းမာတာ အစ်မထက်မှသာရဲ့လား..ဦးဥာဏ်က အစ်မကိုပြောတယ် ခေါင်းမာတာမှ တူနဲ့ထုရင်တောင် ကွဲမှာမဟုတ်ဖူးတဲ့. ha haa :D
အဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ခဲ့၇င်လဲ သူနားလည် ခွင့်လွတ်ပါလိမ့်မယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သိကျွမ်းခဲ့တဲ့အချိန်က နည်းတာမှမဟုတ်တာ.. အချိန်ကကုစားသွားပါလိမ့်မယ်.. ဒါပင်မဲ့နောက်ယောက်ကြ၇င် အဲဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့နော်.. :)
ကျွန်တော့် စကားတွေသည် မှင်တံ ဖျားမှသာ ကြွေကျရိုး ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။